Izihlunu Zemisipha: Ngaba Ikhona Into Ekhathazayo Ngayo?
Iimpawu zeMisipha:Ngaba ikhona into ekukhathazayo?
Ukuhlaziywa nguCarmen Fookes, iBPharm. Igqityelwe ukuhlaziywa ngoMatshi 5, 2021.
Jonga njengesilayidi Jonga isilayidi sangaphambili 1 / 12 Jonga isilayidi esilandelayo
Izandla phezulu ukuba uyahlupheka kwihashe likaCharley
'I-Charley Horse' ligama eliqhelekileyo elisetyenziselwa ukuxilwa kwemisipha. Uyayazi ...
Kodwa ngaba isitampu semisipha singaphezulu nje kokuba yinkampu yemisipha? Zeziphi iimpawu ekufuneka ukhathazeke ngazo? Ufanele ujongwe nini ngugqirha? Sibeke ndawonye ulwazi ukukwenza ube nobulumko malunga neekram zakho kunye nokukunceda ubuyele kwihashe lakho ngokukhawuleza ... ukuze uthethe!
Ubomi obunzima bokuSebenza kweMisipha
Sinezihlunu ezingaphezu kwama-600 emzimbeni wethu. Imisipha yampompoza igazi lethu emzimbeni wethu, isinceda ukuba sigaye ukutya, sigxile amehlo ethu, kwaye isivumele ukuba sihambe, sithethe, sikhabe ibhola kwaye ngokubanzi sibekho njengomntu.
Imisipha ephantsi kolawulo lwethu olwaziyo yimisipha yethu yamathambo. Imisipha engaphandle kolawulo lwethu olwaziyo yimisipha yethu egudileyo kunye nentliziyo, enjengezo zikumgudu wokugaya ukutya kunye nentliziyo.
Nawuphi na uMsipha onokuthi u-Cramp
Ngokobuchwephesha, iicramps zemisipha zinokwenzeka nakweyiphi na imisipha, kulo naliphi na ilungu lomzimba. Iimeko ezinjengorhudo zinokubangela ukuqaqanjelwa sisisu, iintlungu zexesha zibangelwa ziinkampu esibelekweni, isifuba esibangelwa kukudumba okanye ukuxinana kwemibhobho yokuphefumla.
ozokutya emva kweetoni
Kodwa ukugxila kwethu kule slideshow kukwizikram ezenzeka kwiimisipha zenkqubo yethu yemisipha. Ezo zihambisa amalungu ethu kwaye zisebenza namathambo ethu ukusinika amandla kunye namandla. Abo banoxanduva lwale miqatha yomlenze ezinzulwini zobusuku, echibini lokuqubha, okanye ebaleni lebhola. Ezo kuthiwa ziphantsi kolawulo lwethu lokuzithandela.
Xa isihlunu esiqhelekileyo siphantsi koLawulo lwethu siziphatha kakubi
Ke ukuba ezi zihlunu ziphantsi kolawulo lwethu .... kutheni zibambekile?
Ewe, izihlunu zethu zibuthathaka. Ukuqhekeka kwesihlunu okuqhelekileyo kuyenzeka xa imiqondiso yombane evela kwingqondo yethu ihamba phantsi kwemithambo-luvo kwintambo yomqolo ukuya kwisihlunu. Kwi-muscle, isignali ye-nerve ibangela ukukhutshwa kwe-calcium kunye nezinye izinto ezibangela iiprotheni ngaphakathi kwesisipha ukuba zityibilike zigqithisane, zikhokelela ekunciphiseni. Nantoni na ephazamisa inkqubo yokubonisa umbane okanye ukukhutshwa kwekhalsiyam okanye ezinye iikhemikhali kunokubangela ukuxilwa kwemisipha.
Iimeko ezithile zenza ukuba izihlunu zibe sesichengeni seNkampu
Ukonakaliswa kweendlela zenzwa kunokwenzeka emva kwe ukubetha , nge isifo sokugubhuka , emva koxinzelelo okanye ukwenzakala emqolo , okanye emva kwe- ityhefu .
Ukulinganiswa kwetyuwa emzimbeni wethu kuphazamiseka ngokulula kukubila okunzima, ukomisa amanzi emzimbeni, kubantu abadala nakwiimbaleki, nangelixa ukhulelwe.
iziphumo ebezingalindelekanga zeanoro
Amayeza afana womchamo elawula ulwelo emzimbeni, okanye iimimiselo i-cholesterol ephezulu, idibene neekram.
Izihlunu ezisetyenzisiweyo, ezixineneyo, ezibambe indawo ebekiweyo ixesha elide, okanye ezingonelanga ngegazi nazo zisengozini. Ngamanye amaxesha isizathu sokuqunjelwa kwezihlunu asaziwa.
Ndifanele Ndixhalabe Nini?
Uninzi lweekram craps ziyanyamalala kwisithuba semizuzu eli-10 zodwa kwaye kunqabile ukuba zifune utyelelo kugqirha. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uhlolisise unyango ukuba ngaba iicramps zakho:
i-clavamox yedosi yeekati
Unobangela wentlungu okanye ukungonwabi
Inxulunyaniswa nokudumba, ukuba bomvu, okanye utshintsho kulusu
Yenza ubuthathaka bemisipha okanye wenze kube nzima ukubeka ubunzima kwilungu
Sukuphendula kumanqanaba okuzinceda
Sukubonakala ngathi uqhagamshele kwimbangela ebonakalayo, njengokuphelelwa ngamanzi emzimbeni okanye ukwenza umthambo.
Amanyathelo okuzinceda ukuze unciphise iintlungu
Ukolula kunye nokuhlikihla umsipha ochaphazelekayo kunokunceda ukuba uphumle.
Ukuxhamla kwemisipha kubandakanya ithole okanye umsipha (umva wethanga), beka ubunzima emlenzeni ochaphazelekayo kwaye unyuse iinzwane zakho phezulu. Ukuba awukwazi ukuma, hlala phantsi uyolule imilenze. Ngeenkampu ezibandakanya umphambili wethanga (i-quadriceps), zama ukusebenzisa isitulo ukuze uzinze kwaye unyuse unyawo lwakho uye kwiimpundu zakho.
Ubushushu bunokuthomalalisa nokuqinisa izihlunu. Ngenye indlela, abanye abantu bakhetha umkhenkce.
Ukolula ithole rhoqo (kathathu ngemizuzu kangangemizuzu emi-5) kunokunceda abanye abantu bathambekele ekubeni necramp rhoqo. Yima malunga ne-2 ukuya kwi-3 yeenyawo ukusuka eludongeni, gcina iinyawo zakho zicaba kwi-grand kwaye ugobe phambili ukuze uncike eludongeni de ube uziva ukuba stttttrrrreeeetttccchhhh! Yenza oku amatyeli aliqela kwaye ubambe ixesha elide njengoko unokulawula.
Ukuba uqhelene necramp zasebusuku, zama ukusebenzisa umqamelo ukunyusa iinyawo zakho ebhedini ukuba ulele ngomqolo, kwaye ugcine iingubo zikhululekile ukuze iinyawo zakho zingathintelwa.
Iimbaleki: Kunqande ukuCandwa nguCamping
Iimbaleki zixhaphake ngakumbi kukuxinana. Indibaniselwano yelahleko yelahleko, ukulahleka kwamanzi kunye nokudinwa kwezihlunu, ngakumbi kwabo 'baneswiti ezinamanzi anetyuwa' kubenza abagqatswa abaphambili behashe le-charley.
Ukutya kufuneka kube netyuwa eyaneleyo (isodiyam) ukongeza kulahleko, kodwa ungagqithi ngaphezulu.
indlela yokuphatha igxalaba elixinzelelweyo
Ukuzalisa ityuwa kunye nezinye ii-electrolyte Ngexesha lomdyarho okanye uqeqesho olude kunye neziphuzo ezithile zezemidlalo ikwayimbono elungileyo, kodwa kuphephe ukusebenzisa iziselo zemidlalo ezineswekile eninzi. Ixesha elichithwe ukolula ngaphambi nasemva komsitho lixesha elichithwe kakuhle ukuba ufuna ukunciphisa umda wokuvela kweekram.
Unyango lwendalo kunye nolunye unyango
Ukutya ukutya okuphezulu kwi potassium (njengeebhanana, iziqhamo ezomisiweyo, amakhowa, iviniga yeapile), calcium (iimveliso zobisi, imifuno eluhlaza, isardadi) okanye nemagniziyam (iimbotyi, amandongomane, imifuno eluhlaza) inokunceda ukugcina ukulinganisela kweetyiwa emzimbeni wakho. Abanye abantu, njengeembaleki, balahlekelwa yityuwa eninzi kukubila okugqithisileyo, kwaye banokufuna ukongeza ityuwa ekutyeni kwabo, ukunqanda i-hyponatremia enokuthi ikhokelele kwinkampu.
Olunye ulungiso oluye lwazanywa lubandakanya ginkgo biloba , IJapan quince, kunye nezongezo ze vithamin B, ivithamini E. okanye nemagniziyam .
Nangona i-quinine ibisoloko isetyenziselwa iicramps ngaphambili, ayisaphakanyiswa yi-FDA kunyango lweekram zomlenze wobusuku ngenxa yetyhefu.
Ukuba iicramps ziyaqhubeka ngaphandle kwamanyathelo okuzinceda, jonga ugqirha wakho. Kukho amanye amayeza anokuqwalaselwa, kunye nokuthomalalisa iintlungu njenge-acetaminophen ( UTylenol ) okanye ibuprofen ( Yimbi , Imotrin ) kunokuba luncedo.
Ugqirha wakho unokumisela ukuba ufuna isongezelelo sezimbiwa, njengemagniziyam, kwaye unokuqhuba nophando olongezelelweyo ukuzama ukumisela unobangela.
Umahluko phakathi kwe-advil kunye ne-aleve
Kugqityiwe: Iikhampu zeMisipha: Ngaba kukho nantoni na enokukhathazeka ngayo?
Iimpawu eziqhelekileyo ezili-10 ezingafanelekanga ukungahoywa
Umzimba wethu yinkqubo emangalisayo, entsonkothileyo. Yenziwe ngezigidi zezigidi zeeseli ezilungelelaniswe ngamalungu amaninzi, kunye nenkqubo yokujikeleza kwegazi enokuluka phantse amaxesha amabini anesiqingatha ...
Iimemo malunga nokuyeka ukuya exesheni- Into ekufuneka ayazi wonke umntu wasetyhini
Uluntu luthanda ukunyanga ukuyeka ukuya exesheni njengesifo; into ekufuneka iphetshwe ngandlela zonke. Kodwa ukuya exesheni kunokuba yinto elungileyo. Akusekho ukutshintsha kwemozulu kwenyanga, iingozi zexesha, okanye ukukhathazeka kokukhulelwa. Ukuzithemba nokuzazi ...
Isihlunu seMisipha. Ikliniki yaseMayo. 2021 http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/muscle-cramp/home/ovc-20186047
I-spasms yesandla okanye yeenyawo. I-Medline Plus. 2021 https://medlineplus.gov/ency/article/003194.htm
Sukuvumela iinyawo ezinqatyisiweyo kunye namahashe eCharley akucothise Izizathu ezisi-7 kunye nezilungiso zeenyawo zenyawo kunye namahashe e-charley. Ukuhlaziywa kwe-10 kaSeptemba 2020. Ikliniki yaseCleveland. https://health.clevelandclinic.org/2015/10/dont-let-foot-cramps-charley-horses-slow/
amayeza kunye nokuncipha komzimba
indlela yokusebenzisa ukuhambisa umnxeba
i-previcox yezinja ebezingalindelekanga
Uyikhuphele njani imods minecraft